Avy aty an-tanindrazana : asehon’i Gwen any Frantsa ny « Esperanto » | NewsMada
Avy aty an-tanindrazana : asehon’i Gwen any Frantsa ny « Esperanto »
Tafaverina any Normandie-Frantsa, toerana nahalehibe azy, i Gwen Rakotovao, teratany malagasy, fanta-daza any amin’ny firenena maro eo amin’ny tontolon’ny soradihy. Anisan’ny anton-diany ny haneho an-tsehatra ilay soradihiny vaovao, mitondra ny lohateny hoe « Esperanto », ao amin’ny Trianon Transatlantique ny 30 janoary izao.
Raha tsiahivina, teto Antananarivo no nanehoany voalohany ity soradihy ity, tamin’ny volana septambra, seho niarahany tamin’i Saroy Rakotosolofo sy i Imiangaly. Soradihy lalaovin’olo-tokana faharoa noforonin’i Gwen Rakotovao izy ity, taorian’ilay hoe « L’amour, la liberté », noforoniny ny taona 2014 tany New-York.
Foto-kevitra fonosin’ity soradihy ity ny hoe ahoana ny hananana fanantenana raha toa ka mbola betsaka ireo zavatra manasaraka antsika (mpiara-monina, mpiray tanindrazana, sns), toy ny teny, ny fomban-drazana sy ny maro hafa. Maneho ny fitadiavany ny atao hoe firaisankina i Gwen.
Hiavaka amin’ny hita tao amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM) ity fampisehoana any Normandie ity. Hizara roa izany ka handray anjara, mandritra ny tapany voalohany, ny mpianatra avy amin’ny sekoly iray ao Sotteville-Lès-Rouen. Amin’ny tapany faharoa kosa no hilalaovan’ity mpanao soradihy ity ny « Esperanto ».